Ngikanye namalungu athile imidlalo, ungakwazi ukuqeqesha umuntu ukucabanga ngokunengqondo, ukubala izenzo zabo ezingaba nayo ihamba eziningana ngaphambili? Yiqiniso, lokhu kuzosiza aphumelele chess. Abanye abantu uzise isigaba ezemidlalo imidlalo, abanye njengabakhulu sebekubeke ngokumelene lasho amazwi anjalo. Phela, njengoba umdlalo we-chess kungaba umcimbi womdlalo? Lapha futhi ugijime futhi gxuma, futhi akudingekile ukuba baphonse lutho. Kodwa lapha kudingeka sicabange, cabanga, ahlaziye. Futhi lokhu kubaluleke ngaphezu uphonsa, edonsa kanye ukuwa.
Abacwaningi abaningi baye bame kwelokuthi okwazalelwa kuyo chess kuyinto India. Kodwa kukhona eyeza nezazi zezinkanyezi ezikhuluma icebo yabo ukhathazeke nge EMesophothamiya China. Nakanjani ukuthi ngaphambi India wanika chess zwe ngesimo lapho esiwaziyo namuhla, base beqale ngokukipita nezinye imidlalo akuzona eziyinkimbinkimbi njengokucindezeleka chess, kodwa namanje ofana nabo.
Phakathi kwemibhalo yesandla yasendulo ungathola legend ngokudalwa chess - kuba Brahmin izandla ezithile. Wabuza inkosi yayo e yafika eliyigugu, umvuzo obonakala ungelutho. Wayefuna ukuthola okusanhlamvu eziningi kangaka kakolweni, owawungumnyaka ukuphuma uma ibhodi for chess kubo enwetshiwe ngendlela elandelayo: iseli kuqala omunye okusanhlamvu, kwesibili - ezimbili - yesithathu ezine, nokunye, kwandziswa kwelinani ngesigamu isikhathi ngasinye. Ngenxa yalokho, kwaba ukuthi amabele kucace kakhulu khona futhi emhlabeni wonke.
Kodwa njengoba kunoma imuphi umthombo etemibhalo mayelana chess akukhulunywa kuze lesithupha AD leminyaka, izazi-mlando eziningi zazo zikholelwa ukuthi chess uvele ngalesi sikhathi.
Nasi umlando we Sicilia Defense
Defense Sicilia - a okokuqala chess. Iqala uhamba 1.e4 C5. Lokhu ukuvikelwa abadlali ekhulwini XVI ezaziwayo. Ukusetshenziswa Its amaqembu abo futhi Gioachino yamaGreki Dzhulio Polerio. Ngesikhathi inhliziyo yalesi aseqala ukuthambekela ukudala izikhundla imvelo quin.
Defense Sicilia okokuqala okukhulunywa ngekhulu leshumi nesithupha ku indatshana Lucena. Khona-mlando ungathola ulwazi mayelana nalesi okokuqala imisebenzi kamuva yamaGreki futhi Palero. Ukuphuthuma isihlobo yokuvikela kwakunjalo ekhulwini nesishiyagalolunye. Kwakuvamise ezifana abadlali ethandwa njengoba Howard Staunton, Louis-Charles Max, Louis Paulsen futhi de La Bourdonnais. Kodwa nge ekuqaleni kwekhulu lamashumi amabili, isidingo uwile aseqala kakhulu Sicilia. Jose Raul Capablanca, eyesithathu iqhawe emhlabeni e umdlalo chess, kubhekwe ukuvikelwa abangaphelele.
Kuphela ekuqaleni 40s of leminyaka elidlule, isidingo sokuvikelwa isibe kancane kancane. Kwaba nomthelela kule nkinga Aleksandr Kotov, u-Isaka Boleslavsky nabanye abadlali. Kamuva ngo-mbono yokuziphendukela lokhu kuvikela senziwa umnikelo Ljubomir Ljubojevic, Leonidom Shtaynom, Ben Larsen.
Phakathi GMS yesimanje uncamela ukuvikela Sicilia, ohlwini Garry Kasparov, uBoris Gelfand, u-Alexei Shirov, Anand Vashvanan ngisho ezinye ubuntu owaziwa.
Indlela abasabela ngayo omnyama?
Sicilia Defense - kuyinto ozithandayo abadlali abaningi DEBUT. Isetshenziselwa kuphela umuntu imfundamakhwela futhi grandmasters okhokhelwayo. Kulesi Ukuvikelwa ukuhlukanisa eziningi sub-ongakhetha neenkambiso. Ake ucabangele ezinye zazo.
Leli qembu kuhlanganisa izinhlelo yomdlalo, lapho chess ezimhlophe onilwelayo indawo emaphakathi ihamba D2-D4 kanye G1-f3. izingcezu Black bangase basabele ngezindlela ezahlukene, isibonelo, omunye dragon. Leli gama livela egameni indawo pawns abamnyama, okuyinto kunjengetshe dragon.
Sveshnikova okufana, noma okufana Chelyabinsky
Ukuvikelwa chess kulesi simiso kubonisa ukuthi abantu abamnyama izingcezu uhlelo kuyinto umdlalo isenzo abahlala engxenyeni ephakathi ebhodini. Noma ubani odlala izingcezu amhlophe, zama ukusebenzisa zonke ubuthakathaka ophikisana naye. Lolu khetho ngenkuthalo esetshenziswa GMS isigaba ephakeme.
Kunezinye ezahlukeneyo eziningi Sicilia Defense, kodwa lowo wayesanda angene ezweni chess, lokho kwanele futhi yini iye yachazwa kakade.
ukulungiselela Physical for chess
Abanye abagxeki bakholelwa ukuthi chess ukulolonga umzimba akunandaba. Uyazi ukuthi Sicilia wokuziVikela namanye ukuvuleka e umdlalo, futhi lokho kwanele. Futhi lapha nalaphaya! isimo wezeMpilo GM nje kubalulekile njengoba yimuphi omunye umsubathi. Phela, i-chess isidlali uthatha amahora ambalwa egumbini, behlezi etafuleni futhi ukucabanga kanzima. Ngakho-ke, kufanele uzilungiselele kahle le nqubo kanye nemibandela izobe ise ngaphansi kwazo.
Ngakho, umdlali kuyodingeka dumbbells, treadmill, ibha. Imatasa ngayo yonke le mishini, GM ngeke zithole amandla, i-oksijini ukuze ingqondo yakhe uyokwenza more ngenkuthalo, futhi ngendlela efanele, futhi imibono umdlalo, sizovela ikhiqize kakhudlwana.
Qala ukudlala namuhla
Njengoba kwase kunabantu abaningi inkulumo ethi "Sicilia Defense" (chess) futhi ufunda incazelo kulesi sihloko, ungakwazi yini ukuqonda ngaphandle umkhuba kangakanani. Konke lokhu afake futhi baphethe ngokuthi chess awukwazi ukuphatha. Kodwa lokhu akulona njalo. Kuyinto kudingekile kuphela ukuthola isineke isifiso, futhi wonke umuntu uzokwazi ukuthi ube chess umdlali odumile.
Thenga breathalyzer engabizi Futhi uyigcine isikhathi eside